Fanamboarana sy fanoloana daba - Filankevitry ny morontsiraka afovoany
Lisitry ny fako Bin Collection Fanamboarana plastika malefaka My 3 Bins Bin Collection Recaptcha Andron'ny fanangonam-bokatra antsipirihan'ny adiresiny Tobin-javamaniry sarony maitso Sarom-bilany mena Andro fanangonana Bin Biby fanampiny Serivisy fako fandraharahana Trano fandoroana sarony mavo Mitatitra serivisy tsy hita Fanamboarana sy fanoloana daba Hanova ny habenao Serivisy fako vaovao
Raha simba ny dabanao, tsy misy kodiarana na misy sarony tsy hita na tapaka dia azonao atao ny manamboatra azy io.
Tsy misy sarany ny fanamboarana. Ny fanamboarana dia ahitana:
Ny fanamboarana koba amin'ny vatana sy ny sarony dia atao ao anatin'ny 2 andro fiasana aorian'ny nandraisanay ny fangatahanao.
Azafady, azafady: Ny koba efa simba tsy azo amboarina dia hatakalo amin'ny koveta fanoloana raha toa ka apetraka eo amin'ny sisin-dalana ny koba taloha mba hanesorana.
Raha te hangataka fanamboarana dabam-bary dia tsidiho fotsiny ny tranokala famandrihana an-tserasera amin'ny manindry eto na mifandray amin'ny Foiben'ny serivisy mpanjifa amin'ny 1300 1coast (1300 126 278).
Koba nangalarina: Raha te hanao tatitra momba ny koba nangalarina dia mifandraisa aminay Foiben'ny serivisy mpanjifa amin'ny 1300 1coast (1300 126 278).